DEG DEG:- Doorashada xubnaha Aqalka Sare u matali doona Galmudug oo haatan socota (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Doorashada xubnaha Aqalka Sare u matali doona Galmudug oo haatan socota (SAWIRO)
Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu haatan si toos ah uga bilaawday doorashadda xubnaha Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya u matali doonna Galmudug.
Xarunta baarlamaanka maamulka Galmudug waxaa haatan kuwada sugan musharixiinta Aqalka sare u matali doonta Galmudug, waxayna xildhibaanada Galmudug maanta ku howlan yihiin inay inta badan xubnaha Aqalka sare soo doortaan.
Sidoo kale, waxaa laga yaabaa in maanta laga wada gaari waayo dhamaan doorashada xubnaha oo maalinta berri ah qeybta dhiman dib loo dhigo, balse musharixiinta ayaa ku wada sugan goobta ay haatan doorashadu ka socoto.
Dhinaca kale, ciidamada nabad-sugidda iyo kuwa booliska maamulka Galmudug ayaa si weyn u adkeeyay ammaanka xarunta baarlamaanka ee maamulkaasi, halkaasi oo ay doorashadu ka socoto.
Waxaa sidoo kale, goobta ay doorashadu ka socoto ku sugan guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir iyo ku-xigeenadiisa.